Ịgba aghara, mkpasu iwe, ịmegbu onwe ya Esi esi kwalite omume ụmụaka nke ụmụaka
Ndi umuaka obere umuaka?
Omume mmekọrịta ụmụntakịrị nanị na-enwe mmekọrịta na ndị ọzọ
Àgwà ọma - ka bụ isiokwu dị mkpa na agụmakwụkwọ?
Mee ka mmekorita ụmụ mmadụ na nkà na ụzụ sie ike - gịnị dị mkpa?
Ngwá ọrụ nkà na ụzụ bụ nkà nke ụmụaka ga-ebu ụzọ mụọ. Ọ dịghị onye na-abịa dị ka a na-elekọta mmadụ nọ n'ụwa, na-ezitere a mma na-elekọta mmadụ omume na ina mere kasị akụkụ dị mkpa nke socialization na muta usoro. Ọ bụ ndị nne na nna na ebe ụmụ mmadụ na-elekọta mmadụ na-emetụta omume ụmụ mmadụ.
Na-agwụ ike, na-ewe iwe, na-emegbu mmadụ? Otu esi akwalite omume nke ụmụaka
N'ụlọ anyị, a chọrọ ka mmekọrịta mmadụ na ibe ya na-arụkọ ọrụ. A na-atụ anya onye ọ bụla na ọ bụghị naanị iwu ka ọ ga-eme, kamakwa ya na ụkpụrụ na ụkpụrụ.
A ghaghị mụta ihe gbasara mmekọrịta ụmụaka na nkà na ụzụ
Ọ bụrụ na ịnweghị ya, enwere nsogbu ị na-emeri ndị ọzọ ma bụrụ ngwa ngwa ịghọ onye ọzọ.
Ya mere, ọ ga-abụ ihe mgbaru ọsọ nkuzi dị mkpa maka gị dịka nne ma ọ bụ nna iji kụziere nwa gị ụkpụrụ nke mmekọrịta mmekọrịta. Mgbe e mesịrị, a ga-enyere gị aka na ọrụ a site na ụlọ ọrụ ndị dị ka ụlọ akwụkwọ ọta akara na ụlọ akwụkwọ.
Na mbụ, ụmụaka na ụmụ na-eto eto na-edozi onwe ha. Ha na-emeghachi omume n'ụzọ siri ike ma ha enweghị ike ịtọghachị mkpa ha. N'okwu a, ndị nkụzi na ndị ọkà mmụta mmekọrịta ọha na eze na-ekwu banyere ego ego nke ụmụaka.
N'ihi na-amụ ije, ụwa ebute nanị gburugburu n'onwe ya na-nwere ihe ọ bụla na-eme na-achọ naanị ọdịmma. A obere nwa nanị bụghị ma na-amata mkpa nke ndị ọzọ na-akpa àgwà ya. Na mgbakwunye, o nweghi ike igosipụta omume nke aka ya na ihe ọ rụpụtara. N'ihi ya, a abụọ nwa afọ nke ọ bụla ikpe ọmụma bụ ka amatakarị mgbe ọ na akwusila ọzọ site ntutu. Enweghị ike ịghọta na ọ na-ewute onye na-egwuri egwu. Akọ na uche n'omume ọma anaghị adị n'oge a.
Iji mee ka nke ka njọ, eziokwu ahụ bụ na asụsụ adịghị ezube dị ka ihe kasị mkpa mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Ịmụta, ịmalite inwe mmetụta uche, nke mmetụta uche na nke mmekọrịta mmadụ na ibe yana ahụmahụ ọ bụla ị na-emeso ụmụaka ndị ọzọ na ndị okenye na-enyere nwa gị aka ịgbasa nkà na ụzụ ya.
Ahụmahụ na nlele anya n'ime ụmụaka egosiwo na ọ dị mkpa ka a mụta ihe gbasara mmekọrịta mmadụ na nwata n'oge nwata.
A ghaghị ịgba ume na-elekọta ụmụ mmadụ
Ụmụaka na-etolite n'ịhapụ onwe ha na-esiri ya ike ịkwụ ụgwọ maka enweghi ahụmahụ mmụta mmụta mmekọrịta na kọntaktị n'ọdịnihu na mmepe ha.
Ya mere, ọ dị mkpa na nwatakịrị gị na ndị ọzọ na-akpachi anya. Dịka ọmụmaatụ, gaa na otu egwuregwu ma ọ bụ mee ihe na ezinụlọ nwere ezi enyi na mgbe niile. Ihe omumu mmuta maka nwa gi di uku ma gi onwe gi nwekwara ohere isoro nne na nna ndi ozo.
Ọbụna nurseries na kindergartens akpọ ọrụ dị mkpa mgbe ọ na-abịa nkwalite nke na-elekọta mmadụ omume. Nwa gị ebe ọ ezute ọtụtụ dị iche iche ụmụ na-amụta na-ewepụta ha mkpa ha ozugbo na-edozi esemokwu constructively. Ya mere, mee nwa gị ka ọ gaa na-elekọta ụlọ mgbe nile ma nyere ndị nkụzi aka iwusi mmekọrịta mmekọrịta mmekọrịta site n'ịnọgide na nrubeisi n'ụlọ.
Amamihe na ezi omume bụ otu n'ime ihe mgbaru ọsọ mmụta kachasị mkpa maka ọgbọ ndị gara aga. Ma ihe ndị a ọ ka dị mkpa taa? Ee, àgwà ụmụ mmadụ na-enwe ezi mmekọrịta dị mkpa karịa mgbe ọ bụla.
Nke bụ eziokwu bụ na nlezianya bụ nkwupụta nkwanye ùgwù maka ndị ọzọ. Tụkwasị na nke a, onye ọ bụla chọrọ ka a na-emeso ya nke ọma. Ya mere, ezi àgwà ka bụ isiokwu mgbe a bịara n'ihe banyere mmekọrịta mmadụ na ibe na mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
Ọ bụrụ na i jiri àgwà ọma kpọrọ ihe, ị ga-egosi nke a na nwa gị site na mmalite. N'ihe banyere omume ha, ụmụaka na-eburu onwe ha ụzọ maka ndị mụrụ ha. "Ịmụta site na ihe nlereanya" bụ okwu a na-eji akwụkwọ ọzụzụ.
Gbaa nwa gị ume ka o jiri mkparịta ụka dịka "biko" na "kelee gị" ma mee onwe gị n'onwe gị mgbe ọ bụla o kwere omume. Mgbe e mesịrị, ị nwere ike ịkọwa ihe mere o ji dị mkpa ka ị bụrụ onye dị mma na enyi. N'ihi na onye na-agbasoghị iwu mmekọrịta nke egwuregwu ahụ, ọ ga-akọrọ. N'aka nke ọzọ, imeta enyi, nwere ike imeghe ọnụ mmiri ahụ - ma ndị ọkachamara ma na nzuzo.
Karịsịa, ụmụaka kwesịrị ịmụta otú ha ga-esi akpa àgwà n'etiti onwe ha na ndị okenye. Nke a, na mbụ, ha kwesịrị internalize ọtụtụ iwu, dị ka na-elekọta mmadụ norm na anụ ahụ na-awakpo mba abụghị na-achọsi ike. Ụmụ ntakịrị agaghị aghọta nzube na nzube nke iwu a ruo mgbe ha ga-enwe ike igosi "onye ọhụụ" ha ma chọpụta na ha onwe ha achọghị ka a tie ha ihe.
Kedu ka m na-eme mgbe nwatakịrị mebiri ihe?
Ya mere, ọ bụrụ na nwa gị nọ na-agbalị ịmanye ihe eji egwuri egwu, dịka ọmụmaatụ, dị ka nne ma ọ bụ nna, ịkwesịrị itinye aka na ozugbo ma gbanwee ọnọdụ ahụ. Gwa nwa gị ka o chere ma ọ bụ nwee ihe egwuregwu ụmụaka ọzọ. Mgbe e mesịrị, ịkwesịrị ịgba nwa gị ume ka ọ kwupụta esemokwu, chọpụta nkwenye, ma ọ bụ chọọ enyemaka n'aka ndị okenye.
Ọ bụrụ na ị setịpụrụ iwu maka mmekọrịta mmekọrịta, ị ga-ahụkwa na ha na-agbaso. Nke a na-agwụ ike, mana ọ dị mkpa ka nwa gị ghọta ihe ha pụtara ma tinye ya n'ọrụ n'ezie. Ọ bụrụ na ọbịakwute iwu imebi, dịka ọmụmaatụ, mgbe ị na-egwu egwu na ụmụaka ndị ọzọ, ị ghaghị ịdị na-agbanwe agbanwe. Otu ihe dị na nke a nwere ike ịbụ na nwatakịrị gị nwere ike ọ gaghị akpọ ndị enyi ya oge.
Ọ dị mkpa na ị na-ekwupụta ugboro ugboro àgwà ndị ọzọ na-adịghị na-eme ka ndị mmadụ ghara ịkwanyere gị ùgwù, na-eme ka ịkwanyere ùgwù, mmekọrịta mmadụ na ibe gị.
Foto na-acha agba nke Ụlọ Nche nke Pisa
Kedu ihe mere anyị si esi na nri siri ike? ụmụaka ajụjụ
Ijeghari na umu